India newborn twins named Corona and Covid after virus – Politicopathy
Amawele aseNdiya asanda kuzalwa okuthiwa uCorona noCovid ngemuva kwegciwane
Asia India Reuters
La mawele, umfana nentombazane, azalwe esibhedlela sikahulumeni enhlokodolobha yezwe uRaipur ngoMashi 27, ezinsukwini ezimbili ngemuva kokuvalwa kwendlela obekuphazamisa ngayo impilo yabantu yansuku zonke.
Lo mbhangqwana uthe amagama azowakhumbuza ngobunzima ahlangabezana nabo ngesikhathi kuvalwa umlomo naphambi kokulethwa ngempumelelo esibhedlela sikahulumeni ngeledlule.
UVerma uthe abanalo usizo ngesikhathi sokubeletha njengoba amalungu omndeni wabo engakwazi ukufinyelela eRaipur ngenxa yokuvalwa kwendawo.
Lo mbhangqwana uthe kunengcindezi, kodwa, evela kubadala bemindeni futhi bangasishintsha isinqumo sabo ngokuhamba kwesikhathi baphinde baqambe izingane zabo kabusha.
I-India ingaphansi kwamakhethini amasonto amathathu kuze kube ngu-Ephreli 14 obone ukumiswa kwezinsizakalo zokuhamba ngemiyalo eqinile yokuhlala ekhaya, ngaphandle kokuthi uhambo olubalulekile oluya ezindaweni ezinjengezimakethe noma amakhemisi, for the country’s 1.3 billion population.
Kube khona a spike emacaleni e-coronavirus aqinisekisiwe ezweni anezifo eziseduze nokufa kuka-3,000 no-68.
Inani eliphelele lamacala aziwayo eNdiya lincane uma liqhathaniswa ne-United States, i-Italiya neChina, kodwa ochwepheshe bezempilo bathi India kungenzeka kube amasonto ambalwa kude nokuhlinzwa okukhulu okunganqamula uhlelo lwayo lwezempilo lomphakathi oselunamandla.
Lesi sihloko sanyatheliswa ekuqaleni Al Jazeera.
Thumela Previous Amasosha ama-4, ama-jihadists angama-63 abulawa ngokuxabana eNiger
Post Next Noma ngabe ungumhlali noma umnikazi wasekhaya wesibili, Nazi izinto ongafisa ukuzicabanga ngenkathi inkinga yaseSpain ye-COVID-19 iqhubeka, kubhala umthengisi wezezindawo u-Adam Neale
WASHINGTON (Reuters) – Senate Democrats on Tuesday readied a measure condemning President Donald Trump for the tear-gassing of peaceful protesters
FLYNN-KISLYAK TRANSCRIPTS RELEASED Nadler said the committee would soon hear testimony from DOJ whistleblowers and former DOJ officials, who he
Okubukwe kakhulu (amahora angu-24 adlule)
Okubukwe kakhulu (Izinsuku eziyi-7 ezidlule)
Phendula ku-Twitter 1267900667898650626I-Retweet ku-Twitter 1267900667898650626Njengo-Twitter 1267900667898650626
Phendula ku-Twitter 1267900542707052544I-Retweet ku-Twitter 1267900542707052544Njengo-Twitter 1267900542707052544
Phendula ku-Twitter 1267899751992659969I-Retweet ku-Twitter 1267899751992659969Njengo-Twitter 1267899751992659969
Khuluma ingqondo yakho.